Afrika, 01 March 2018
Khamiis 1 March 2018
Kenya: Maxkamado Laaley Natiijada Doorashooyinka Xildhibaanno
Maxkamadaha sare ee dalka Kenya ayaa baabi'iyey kuraasta qaar ka mid ah xildhibaannadda Kenya ee doorashadii dhawaan loo soo doortay ka dib markii musharrixiintii kale ee la tartamayay ay dacwado ka gudbiyeen, kuwaas oo sheegey in aysan doorashada si xalaal ah u dhicin.
Mucaaradka Jabuuti oo Qaaddacay Natiijada Doorashadii Baarlamaan
Xsibiyada mucaaradka ee Jabuuti, gaar ahaan kuwii qaaddacay ka qeyb galka doorashaddii baarlamanka ee dalkaasi ka dhacdey 23-kii bishan Febraayo, ayaa qaaddacay natiijadii doorashadaasi.
Kenya: Xildhibaan ku Eedeyey Dowladda Ka Bixidda Macallimiinta ee G.W. Bari
Mid ka mid ah xildhibananada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, ayaa si weyn ugu dhalleeceeyey dawladda inay mas’uul ka tahay bixitanka macallimiinta ay ka baxayana gobolkaasi.
Kenya oo Ciidamo Dheeraad ah Geyneysa Xadka Soomaaliya
Wasaaradda amniga ee Kenya Fred Matiyaang, ayaa sheegay in ay ciidamo badan geynayaan xadka ay la wadaagaan Soomaaliya.
Jabuuti oo Ka Hadashay Sababta ay Heshiiskii DP World Uga Baxeen
Dowladda Jabuuti ayaa soosaartay warsaxaafadeed ay uga hadlayso khilaafka u dhexeeya iyaga iyo shirkada DP World kaasi oo keenay in 22kii bishan ay dawladda Jabuuti ka baxdo heshiiskaasi isla markaana ay shaqada ka joojiso shirkadda DP World.
Kenya: Maxkamadda Sare oo Ayiddey Guushii Aaden Barre Ducaale
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa laashay tallaabo maxkamadeed oo siyaasiga Faarax Macallim uu ku diidanaa ansxanimada doorashadii kurisga magaalada Gaarsia oo hore loo sheegay inuu ku guulaystay Aadan Barre Ducaale.
Dawlad Degaanka Ismaamulka Soomaaldia Itoobiya ayaa dhowaan sheegtay inay xabsiga kasii daysay maxaabiis dhan ilaa 1500 qof oo loo hayey dambiyo kala duwan. Hase yeeshee, qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka ayaa soo jeediyey eedayn ah in dib loo xiray qaar ka mid ah dadkii la sheegay in lasii daayey.
Midowga Afrika oo ka Hadlay Doorashadii Jabuuti ka Dhacdey
Gudida Midowga Afrika ee goob joogga ka ahaa doorashadi baarlamaanka ee Jabuuti ka dhacdey Jimcihii, ayaa maanta si rasmi ah u shaaciyey war bixinta ay ka soo saareen qaabkii doorashadu u dhacday.
Kenya: Maxkamad Amartay Dib u Soo Celinta Mucaarad La Musaafuriyay
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku amartay wasaaradda arimaha gudaha ee dalkaaasi in dib ay u soo celiso sarkaal sare oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka laguna magacaabo Miguna Miguna oo dalka hore looga masaafuriyey.
ONLF oo ka Hadashay Maxaabiis la sii Daayey
Af-hayeenka ururka ONLF, Cabdulqaadir Xasan Hirmooge ayaa sheegay in ururka uu tallaabadaas soo dhaweynayo, hase yeeshee loo baahan in la hubiyo cidda iyo tirada dadka ay Dawlad-deegaanku sheegtay in la sii daayey.
Doorashada Baarlamaanka Jabuuti oo Billaabatay
Dalka Jabuuti waxaa maanta ay dadweynuhu u dareereen codeynta doorashada baarlamanka, iyadoo xisbiga ugu weyn isbaheysiga mucaaradka ee MRD uusan ka qeyb galin doorashadaasi